Mid kamid ah Dowladaha Afrika oo diiday in ay xariirka u jarto Dowlada Qadar | shumis.net
Home » News » Mid kamid ah Dowladaha Afrika oo diiday in ay xariirka u jarto Dowlada Qadar
Mid kamid ah Dowladaha Afrika oo diiday in ay xariirka u jarto Dowlada Qadar
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qaar kamid ah Wadamada Carabta iyo kuwa Muslimiinta badan ku nool yihiin ku cadaadineysa in ay la caloobaan Dowlada Qadar una jaraan xiriirka Diblumaasiyadeed iyo midka ganacsi.
Dowlada Eritrea oo kunool yihiin Musilmiin badan ayaa iska diiday dalab uga yimid Boqortooyada Sacuudiga oo looga dalbanayay in xariirka u jarto dowlada Qadar, waxa ayna Eritrea dhagaha ka fureesatay dalabka uga yimid Sacuudiga iyo xulufadiisa.
Qaar badan oo kamid ah Wadamada Carabta ayaa si toos ah xariirka ugu jaray dowlada Qadar, waxaa sidoo kale jira dowlado iyana hoos u dhigay xariirkii kala dhaxeeyay dowlada Qadar una yeertay diblumaasiyiinta ka joogay Doha.
Dowlada Sacuudiga iyo xulufadiisa oo cadaawad xiligan kala dhaxeyso dowlada Qadar ayaa ku dadaalaya sidii loo go'doomin lahaa dalka Qadar, waxa ayna ku eedeeyeen Dowlada Qadar in ay taageerto waxa loogu yeero argagacxisada.
Title: Mid kamid ah Dowladaha Afrika oo diiday in ay xariirka u jarto Dowlada Qadar